पत्याउनै नसकिने गरी घट्यो सुनको मुल्य हेर्नुहोस कति पुग्यो? - Nepali in Australia
पत्याउनै नसकिने गरी घट्यो सुनको मुल्य हेर्नुहोस कति पुग्यो?
September 30, 2021 autherLeaveaComment on पत्याउनै नसकिने गरी घट्यो सुनको मुल्य हेर्नुहोस कति पुग्यो?
काठमाडौं । सुन बिक्री गरेर चाँदी खरिद गर्न थाल्दा सुनको मूल्य ओरोलो लाग्न पुगेको छ । अमेरिकाले अत्याधिक चाँदी प्रयोग हुने योजना अगाडि सारेपछि सुन बिक्री गरेर चाँदी खरिद गर्न थाल्दा सुनको मूल्य ओरालो लाग्न थालेको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोबाइडनले अत्याधिक चाँदी प्रयोग हुने ‘ग्रीन भ्यालु प्रोजेक्ट’ योजना अघि बढाएपछि सुन बिक्री गरेर चाँदी खरिद गर्न पुग्दा सुनको मूल्य घटन पुगेको सुन चाँदी व्यवसायी माणिरत्न शाक्यले बताए ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
एक्कासि एकैदिनमा यसरी घट्यो सुन-चाँदीको मूल्य